Somali News 12.21.21
Published December 22, 2021 at 10:38 AM CST
Dimuqraadiga ugu sarreeya Aqalka Wakiilada ee Iowa ayaa sheegay in Dimuqraadiyiintu ay ka shaqeynayaan soo jeedin iyaga u gaar ah oo ku saabsan isbeddelka canshuurta.
Hogaamiyayaasha Jamhuuriga—kuwaasi oo gacanta ku haya aqalka dawladda-ayaa sheegay in ay doonayaan in ay dhimaan cashuuraha dakhliga sanadka soo socda. Qaar waxay leeyihiin hadafkoodu waa inay meesha ka saaraan canshuurta dakhliga.
Maamulka Trump ayaa beeraleyda galleyda si xad dhaaf ah u bixiyay lacag dhan $3 bilyan oo gargaar federaal ah sanadka 2019, beeraleyda koonfurta ayaa la siiyay wax ka badan dalagyo la mid ah kuwa meelaha kale ee dalka, hay’ad ilaalisa federaalku ayaa ogaatay.
Xafiiska la xisaabtanka dowladda ayaa warbixin uu soo saaray Isniintii ku sheegay in khilaafyada ka dhashay canshuuraha uu soo rogay madaxweyne Donald Trump ay waxyeeleeyeen beeralayda, balse habka wasaaradda beeraha ee Mareykanka ee gobol-gobol uu yahay mid khaldan, taasoo keentay in la bixiyo lacag dheeraad ah iyo magdhow aan joogto ahayn.
Aagga maaraynta duur-joogta Loess Hills ee galbeedka Iowa's County Monona waxay beddelaysaa xeeladdeeda ilaalinta. Qorshaha ilaalinta kaynta ayaa la soo jeediyay, taas oo macnaheedu yahay farsamooyinka loo isticmaali doono sida khafiifinta kaynta iyo goosashada alwaaxa si loo ilaaliyo loona soo jiito noocyo cusub.
Guddoomiyaha xisbiga Jamhuuriga Kristi Noem ayaa diyaariyay sharci jo